Ampidino Mozilla Firefox ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (50.20 MB)
Ampidino Mozilla Firefox,
Firefox dia mpizaha Internet open source novolavolaini Mozilla hahafahanny mpampiasa internet mivezivezy aminny Internet malalaka sy haingana. Mozilla Firefox, izay atolotra ho anireo mpampiasa maimaimpoana, miaraka aminireo fanavaozana farany; Nanjary hentitra be taminny mpifaninana aminy toa ny Google Chrome, Opera ary Microsoft Edge aminny resaka hafainganam-pandeha, filaminana ary fampifanarahana.
Sintomy ny Mozilla Firefox
Ny mpizaha Internet, izay nahomby taminny fahazoana ny fankasitrahanny mpampiasa internet noho ny interface tsotra sy mora ampiasaina, dia mamela ny mpampiasa hahatsapa ho voaro noho ny safidy fanampiny momba ny fiarovana sy fiainana manokana. Firefox, izay mahasarika ny sainny mpamorona satria rindrambaiko loharano misokatra izy io, mitondra vahaolana vaovao aminny filanny mpampiasa isaky ny fanavaozana vaovao.
Firefox, izay efa navotsotra taminny biraom-pitaovana tsy ilaina avy amini Mozilla, dia nametraka seza fiandrianana tao am-ponny mpampiasa maro ho toy ny mpitety Internet voalohany nampiasa ny firafitra fitetezana takelaka ekenny mpifaninana hafa. Manambatra ny safidinny fanamboarana rehetra ao ambaninny menio mora idirana iray, mamela ny mpampiasa rehetra hanitsy mora foana ny fikirana mety ilainizy ireo.
Firefox, izay voalohany nampiasa ny fikandrana fitadiavana incognito na manafina ny fisehoanny kiheba novolavolaina ho anireo mpampiasa izay tsy te-hijery Internet aminny fomba tsy fantatra anarana ary hamela izay soritra any aoriana, dia nahomby taminny fandrosoana mialoha ny maro aminireo mpifaninana aminity faritra ity ary nanome ohatra iray ho anny izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny browser, izay miaro ireo mpampiasa internet miaraka amina endri-javatra toy ny teknolojia fiarovana ny fangalarana ny maha-izy azy, ny fidirana antivirus sy ny malware, ny fiarovana ny atiny, dia iray aminireo tsara indrindra ao aminny kilasiny raha ny resaka filaminana.
Ny mpizaha Internet, izay misy ho anny mpampiasa na aminny birao na aminny finday, dia ahafahanao miditra mora foana aminny data rehetra ilainao na an-trano, na any am-piasana, na eny an-dàlana, noho ireo fiasa mandrindra azy, ary mamela anao hanohy ny miasa aminny fotoana rehetra. Ho fanampinizay, azonao atao ny manamboatra ny navigateur, izay manolotra plug-in sy fanohanana lohahevitra mifanaraka aminny zavatra tianao.
Vokatrizany, raha mila tranokala maimaim-poana, azo itokisana, haingana sy mahery ianao izay mety hisolo ny mpizaha Internet ampiasainao dia tokony hanandrana tokoa ianao Firefox, izay novolavolaini Mozilla.
Antony 6 hisintomana ny Firefox Browser
Ireto misy antony vitsivitsy hisintomana ny tranokala Firefox haingana, azo antoka ary maimaim-poana:
Mahomby kokoa, fikarohana haingana kokoa: Fikarohana avy aminny bara adiresy, safidinny motera fikarohana, tolo-kevitry ny fikarohana mahomby, fikarohana ao aminny tsoratadidy - tantara sy takelaka misokatra
Ampitomboy ny vokatrao: Miasa aminny vokatra Google. Fitaovana pikantsary namboarina. Mpitantana mari-tsoratra. Soso-kevitra adiresy mandeha ho azy. Fampifanarahana aminny cross-device. maody mpamaky. Fanamarinana ny tsipelina. Fanamoriana
Mamoaha, mizara ary milalao: sakano ny horonan-tsary sy feo fanombohana mandeha ho azy. Sary aminny sary. Votoatiny manokana anny mpampiasa ao aminny kiheba vaovao. Aza mizara rohy.
Arovy ny fiainanao manokana: sakano ny cookies anny antoko fahatelo. Fanakanana ny fanangonana hoho. Fanakanana ireo mpitrandraka crypto. Maody incognito. Tatitry ny fiarovana ny tsirairay.
Tazomy mba ho voaro ny mombamomba anao: Fanairana an-tranokala voavaky data. Mpitantana tenimiafina namboarina. Fanadiovana tantara. Famenoana endrika mandeha ho azy. Fanavaozana mandeha ho azy.
Ataovy miavaka ny browser-nao: Themes. maody maizina. Trano famakiam-boky Ataovy miavaka ny fikirana bara fitadiavana. Manova ny lamina tabilao vaovao.
Haben'ny rakitra: 50.20 MB